Spotify ပရီမီယံ APK ကို Android နဲ့ PC အတွက် Download 2018
အန်းဒရွိုက် Applications ကို
ဟေ့ကောင်တွေ, ဒီသင်ခန်းစာတွင်ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ရဲ့ Android ဆဲလ်ဖုန်းအတွက် Spotify ပရီမီယံ APK ကိုရရှိရန်နည်းမှန်လမ်းမှန်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. အမှု၌သင်တို့အနေနဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်ဂီတကိုနှစ်သက်ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာဂီတနှင့်အတူအဆုံးသတ်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်အခါတိုင်းသင်ဒါ့အပြင်ဂီတကိုသတိပြု, သို့ဖြစ်လျှင်ဤစာသားကိုသင်တို့အဘို့ရိုးရိုးဖြစ်ပါသည်. Music ကိုသငျသညျ Melancholie ထဲက get ကူညီနှငျ့သငျအကြောင်းအရာစေမည်.
သင်သည်သင်၏စက်အတွက် On-line ကိုဂီတကိုသတိပြုသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းမှာကရရှိရန်ခွင့်ပြု apps များများစွာရှိပါတယ်. သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း, Spotify အကောင့်သို့အန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတ app ကိုယူတတ်၏, သို့သော်သူကထွက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်အများကြီးထဲမှာမင့်. Android အတွက် Spotify ပရီမီယံ apk အကြောင်းကိုဒီစာသားမလေ့လာပါ.
Spotify ပရီမီယံ apk ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့် podcasts တွေကိုသင်သည် entry ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျအခမဲ့သောင်းချီသီချင်းတွေကိုသန်းပေါင်းများစွာ၏သတိပြုနှင့်ရယူစေခြင်းငှါအရပျ. app ကို၏စံအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်သကဲ့သို့ဒီ app သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်သို့ပြောင်းပေးဖို့အလားအလာရှိပါတယ်.
Spotify ပရီမီယံ APK ကို
Spotify ပရီမီယံ apk အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်. ဒါ့အပြင်သင်လိုအပ်သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းအားလုံးရယူနှင့်တိုင်းကသူတို့ကိုသတိပြုစေခြင်းငှါအရပျကိုမဆိုစက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်. ဒီ app တွင်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့သီချင်းစာရင်းကိုသောသင်တတျနိုငျသ entry ကိုဖန်တီးစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်အရမ်းအင်တာနက်အပေါ်အချို့ဖွင့်စာရင်းများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျကိုသတိပြုဖို့အနုပညာရှင်တွေနှင့်အယ်လ်ဘမ်များတိုက်ရိုက် entry ကိုမရ.
အခမဲ့တူသော packages များများစွာရှိပါတယ်, စမ်းသပ်ခြင်း, ပရီမီယံနှင့်ဒီ app ၏အဆမဲ့ဗားရှင်း. သငျသညျစာရေးသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ထွက်နှင့်အတူ On-line ကိုသီခငျြးမြားကိုသတိပြုရန်ဆန္ဒရှိ, ထိုသူတို့အဘို့ apps များအများကြီးရှိပါတယ်, သို့သော်သူတို့ကအများကြီး options များရှိသည်သို့မဟုတ်လည်းများစွာသောကြော်ငြာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အခမဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
Spotify Apk အခမဲ့ Download
ဂီတကိုသတိပြုဖို့ apps များအများကြီးရှိပါတယ်, သို့သော်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်သင်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်. ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်သင်ကထဲက four.5 rated ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးနောက်သင် Android အတွက် Spotify ကြိုးစားရန်ရှိသည်အနေနဲ့အမှန်တကယ်ဂီတကိုနှစ်သက်နေ5ဂူးဂဲလ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်လက်လီရောင်းချ Play.
Plus အား, ဒီ app ကအားကိုးပုံမှန်အသုံးပြုမှုအပေါ်စေသည်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း interface နဲ့ကွဲပြားခြားနားသောကောင်းသောအရာရှိပါတယ်. တစ်ဦးချင်းစီ Spotify ကနေအပျော်အပါးရ, သငျသညျအခြို့သောဒေါင်းလုဒ်များနှင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားစေခြင်းငှါအဖြစ်.
အဆိုပါပရီမီယံ Spotify App ကိုအချို့သောနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအတူဂီတနှင့်ဗီဒီယို streaming များ App ဖြစ်ပါတယ်, Podcast တခုကိုပံ့ပိုးပေးရန်သက်ဆိုင်ရာ, သင်တို့ကိုဂီတတစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးနှငျ့သငျဟာအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်ဆိုလို.
သငျသညျ Spotify ပရီမီယံကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်, သင်အကောင်းဆုံးဂီတကျွမ်းကျင်မှုရစေခြင်းငှါ, သငျတို့သညျလညျးဒီ app အပေါ် packages များ၏ဆင်တူတဲ့အမြိုးမြိုးကနေသီချင်းတွေကိုရယူနိုင်သည်. သင့်ရဲ့လိုချင်တပ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောမှန်ကန်သောနည်းလမ်းအားရွေးချယ်ပါ.
ထိုတစ်ဦးတည်းသာဒုတိယအတွက်ရယူထုတ် start, ပြီးတော့ဒီ app များ၏ထူထောင် technique ကိုသင်ယူဖို့ button ကိုရယူအပေါ်ရိုးရှင်းစွာအပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ. သင်တစ်ဦးခြေလှမ်း skip သို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများစေပါဘူးသေချာ.
နောက်ဆုံးပေါ် ဖေဖော်ဝါရီ 20, 2018
installs 200,00သုည,00သုည +
တိုင်းတာခြင်း 35.5ကို MB
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်ပါတယ် four.1 + (SDK ကို 16)
developer Spotify, Ltd.
အကြောင်းအရာပစ္စည်းရမှတ် အဘို့အ rated 12+
Options ကို - Android အတွက် Spotify ပရီမီယံ apk
Spotify ပရီမီယံ၏ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်း၌သငျကစားရန်ဆန္ဒရှိမဆိုညှိကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်, သင် Spotify ပရီမီယံ APK ကိုရရှိရန်ဖြစ်ပျက်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လည်းအခမဲ့အခမဲ့ဆိုညှိရယူနိုင်သည်. ဒီပရီမီယံဗားရှင်းတွင်, သငျသညျ Pop-up ကြော်ငြာနှင့် spam များကိုကြော်ငြာအမျိုးမျိုးကိုအခမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဒါ့အပြင်အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်.
ဒီ app ကိုအခမဲ့လုံးဝကြော်ငြာသည်နှင့်သင်တဲ့ pop-ups သို့မဟုတ် malware ကိုမဆိုမျိုးရ gained't.
အစဉ်အလာ app ကိုသငျသညျအထဲကကြော်ငြာနှင့်အတူကမရကြဘူးမထွက်ရသင်ကအဆမဲ့ Skip function ကိုရကြလိမ့်မည်.
ဒီ app တွင်, သူတို့ drive ကိုကျပန်းကန့်သတ်ရုပ်သိမ်းင့်. ဒီ app ကိုရရှိရန်အခမဲ့နှငျ့သငျအခမဲ့အဆမဲ့ဂီတစီးဆင်းစေခြင်းငှါ.
သင်လည်းသင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသော gadgets သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်း၌သင်တို့၏သီချင်းများတိုက်ဆိုင်ညှိယူနိုင်ပါတယ်, ဆေးလုံးနှင့်ပင်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုကွန်ပျူတာ. သငျသညျအထဲကတစ်ခုခုကိုငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အတူအခမဲ့ရေဒီယိုတစ်ခုအရေအတွက်သတိပြုနိုင်ကြလိမ့်မယ်.
တဦးတည်းကို Android ပေါ်မှာ Spotify APK ကိုတက် Set နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို
သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့ Settings များဖွင့်လှစ်, setting တွင်, အမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်အဘို့ကို set up ခွင့်ပြုအရေးကြီးသောရဲ့. ကိုသွားပါ Settings များ - လုံခွုံမှု - ကို tick အမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်.
ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၏လမ်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ် file ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်ရုံ downloads, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းထဲကနေဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်. ထို့နောက်အပေါ်ကို click တည်ဆောက်သည် ပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း. ထိုအသင်သည်သင်၏ set ကိုတက်အမြတ်အစွန်းကြောင်းသတိပြုပါလိမ့်မယ်.
ယခုတွင်သင်သည်ရိုးရှင်းစွာယခုထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ app ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်သင်၏ Spotify အကောင့်နှင့်အတူစစ်ဆေး. ထိုအဖြစ်အပျက်၌သင်တို့ကိုအကောင့်တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ထို့နောက်အကောင့်တစ်ခုဘို့မိမိတို့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးမှတ်ပုံတင်ရန်
အခုတော့ app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သငျသညျရိုးရှင်းစွာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာသင့်ရဲ့အကောင့်နဲ့အတူတကွအတွက်စစ်ဆေး. ယခုသင်သည်အဘယ်သူအားမျှကိစ္စများနှင့်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အမှု၌သင်တို့ကိုဒီ app ကိုကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်လမ်းအတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်အတူရင်ဆိုင်နေကြ, ထို့နောက်ရုံအမေရိကန်ပိုင် VPN ကိုအတူတက်ချိတ်. သငျသညျလုံးဝအိန္ဒိယနှင့်အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများ၌ဤအမှားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရိုးရှင်းစွာ Spotify ပရီမီယံ apk နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းထိထိရောက်ရောက် logged in ဝင်သောပါပြီ, သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းများတွင်သင်၏လက်ချောင်းအတွက် Spotify ပရီမီယံ၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးမြင်နိုင်ပါသည်. ကျနော်တို့ကဒီလှည့်ကွက်ကြိုးစားခဲ့ကြ, နှင့်တကယ့်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ကတည်းကငါတို့အဘို့အစနစ်တကျအလုပ်လုပ်တယ်, ထိုသို့မည်သို့ပင်ဆိုစေအလုပ်ဖြစ်တယ်.
ဒါကလက်ရှိနေ့ရက်ကာလ၌ရှိသမျှဖြစ်ပါသည်, သငျသညျ Android အတွက် Spotify ပရီမီယံ apk အကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာန. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသော apps များ၏လမ်းဖြင့်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်. သငျသညျအဘယ်သူမျှမစပမ်း၏မျိုးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများနှင့်အတူအပြည့်အဝ entry ကိုမရ. Android အတွက် Spotify ပရီမီယံ၏ဤ mod ဗားရှင်းတွင်, သင်တို့နှင့်အတူရှိတစ်ဦးက MP3 ဖိုင်ရယူစေခြင်းငှါ 320 kbps, အရာအကောင့်ထဲသို့အကောင်းဆုံးဂီတယူတတ်၏. သင်ပင်အသံ system ပေါ်တွင်ဒီဂီတ play နိုင်ပါလိမ့်မယ်, အသံ system သို့မဟုတ်နားကြပ်. ထိုအဖြစ်အပျက်၌သငျ၏ကို set up သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိ, ရိုးရှင်းစွာမှတ်ချက်တခုထွက်သွား. ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုသင်သည်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်, သင်ကအထောကျအကူရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်ပျက်လျှင်, သူတို့ကိုပျော်မွေ့ပူဇော်ဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ဂီတချစ်သူများနှင့်အတူဝေမျှ.
Spotify ဂီတ .apk ဖိုင်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
updated ကျန်ရှိနေသေးသော: မတ်လ 12, 2018
file ကို Dimension: 37ကို MB
Carrom 3D အခမဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
SnapTube APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ခခြှေဲ APK ကိုဒေါင်းလုပ် Hit
Gloud အားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Vigo ဗီဒီယို – ယခင်က Hypstar 3.8.1 APK ကို
Android အတွက် MAX Cleaner – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ-War Z APK ကို – အခမဲ့ Android ကိုမဟာဗျူဟာဂိမ်း Download
root Checker Pro ကို 3.67 APK ကို
Pokemon GO APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Messenger ကို – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
UC Browser ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | ကုန်ကြမ်း APK ကို…
Azar APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေး APP…
Glass ကိုရေ Keyboard ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – …
တိုက်ရိုက် Talk ကို – free video chat APK…
Android အတွက်မိုဃ်းလင်း Legends – APK ကိုဒေါင်းလုပ်…